Waxaan haysanaa qayb dhan oo ka tirsan Somaliya marka go'aanka dhib male: Kiiniya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxaan haysanaa qayb dhan oo ka tirsan Somaliya marka go’aanka dhib male: Kiiniya
Waxa berito gelinka dambe aad loo sugayaa go’aanka dacwada badda oo dhamaan la ysku raacsan yahay in dalku guul ak soo hoyn maadaama Kiiniya ogaatey inaan meesha waxba u oolin. ”Waxa guusha kuu tilmaamaya dee nin guul haystaa kama maqnaado goobta guusha lagu siinayo ayuu yiri Cali Calasow.
Waxase Kiiniya qabtaa mar hadday Koofurta dalka inteeda badan joogto wax walwala kuma qabto go’aanka badda. ”Waxaan haysanaa qayb dhan oo Koofurta dalka Somaliya ah marka go’aanka badda ee soo baxaya dhib naguma hayo ayuu yiri xildhibaan ka tirsan dawlada Uhuru oo diidey in la sheego magaciisa.
”Somaliya awood ay ku qabsato oo ku xaqiijiso badda loo xukumayo male horta waa inay xoreysaa Koofurta dalkeeda naga xoreysaa ayuu raaciyay. Kiiniya ayaa sheegtay inay qaramada midoobay ka codsatey in sanadka dambe la hoosgeeyo ciidankeeda. Dawlada Somaliya ayaa diidey arinkaa markale.
Waxayse aad ugu rajoweyntahay in doorashada dalka uu soo baxo horgale. ”Anaga waxaan awood saaraynaa sidii aan ku soo saari lahayn horgale aan danahayaga ka fushano oo aan ka ahayn Axmed Madoobe ayuu ku qanacsan yahay xildhibaanku.
”Waa hubka keliya ee aan hadda haysano haddii uu soo noqdo madaxweynaha hadda waxaan qarka u saaranahay in aan dalka ka baxno ugu yaraan Kismaayo ayuu qirtey.
Si kastaba ha ahaatee Kiiniya oo awoodo kale isku halaynaysa markasta ayaa qabta inayna jirin cadaadis hadda ugu iman kara Somaliya.